मिडियालाई जानकारी दिएको भन्दै डा. शेर बहादुर पुनलाई मन्त्रालयले काट्यो पत्र – Epurbeli darpan – ePurbeli
काठमाडौं : सरकारले कारोना भाइरस (कोभिड १९)को बारेमा आवश्यक जानकारी विभिन्न संचारमाध्यममा दिएको र लेख लेखेको आरोपमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनसँग स्पष्टिकरण सोध्न पत्राचार गरेका छ।
अस्पतालको रिसर्च युनिटका संयोजक समेत रहेका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. पुनलाई आइतबार स्पष्टिकरण दिनका लागि मन्त्रालयमा आउन निर्देशन दिएको पत्र बुझाउने तयारी भएको छ।
मन्त्रालयले स्पष्टिकरणको लागि पत्र अस्पताल प्रशासनमा पठाइसकेको छ। जापानबाट पीएचडी गरेर स्वदेश फर्किएका डा. पुनले विभिन्न दैनिक अखबार र अनलाइनमा कोरोना भाइरसप्रति सचेतता फैलाउने उद्देश्यले लेखहरु लेख्दै आएका छन्।
स्पष्टिकरण पत्र पठाइएको भन्ने आफूले सुने पनि हात परिनसकेको उनको भनाइ छ। ‘कोरोना भाइरसको बारे सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी दिएर सचेत गराउन लेख लेख्ने र अन्तर्वार्ता दिने गरेको थिएँ’, डा. पुनले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने,‘ ‘किन स्पष्टिकरण सोधिएको हो। आफै आश्चर्यमा परेको छुँ।’
कोरोना भाइरस नयाँ रोग भएकाले आफूले थप अध्ययन गरेर जनतालाई जानकारी गराउने बाहेक अन्य कुनै गल्ती नगरेको उनले बताए। ‘कोरोना भाइरस नयाँ रोग भएकोले विदेशमा यस बारे भइरहेको अध्ययन अनुसन्धान र आफूले जानेको विषयमा लेखेको हुँ’, उनले भने, ‘संचारकर्मीले जिज्ञासा राखेको विषयमा जवाफ दिएको हुँ। त्यहिं नै गल्ती हो की ?’
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रेस सल्लाहकार माधवप्रसाद तिवारीले भने डा. पुनलाई मन्त्रालयले कुनै किसिमको स्पष्टिकरण नसोधेको बताए ।
‘शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा करारमा कार्यरत डा शेरबहादुर पुनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुनै पनि किसिमको स्पष्टिकरण सोधेको छैन’, सल्लाहकार तिवारीले भने, ‘उहाँलाई फोनमार्फत पटक पटक मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएकोमा सम्पर्कमा नआएपछि प्रशासनले सम्पर्कमा आउन पत्र पत्र काटेको हो ।’ ( अन्नपूर्ण पोस्ट बाट )